Gamma Theta Upsilon - Ny Society of Honor Society
Gamma Theta Upsilon, Fikambanana Honore for Geographers
Gamma Theta Upsilon (GTU) dia fiaraha-mientana ho an'ny mpianatra sy manam-pahaizana momba ny jeografia. Ny sampam-pampianarana manana sampana jeografika manerana an'i Amerika Avaratra dia manana toko GTU mavitrika. Ny mpikambana dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fepetra takiana mba hanombohana ny fiarahamonina. Matetika ny toko dia mitazona ny fihetsiketsehana sy ny zava-mitranga any am-piheverana. Ny tombontsoa amin'ny maha-mpikambana dia ny fidirana amin'ny vatsim-pianarana sy ny fikarohana akademika.
Tantaran'i Gamma Theta Upsilon
Ny fakan'ny GTU dia azo jerena ny taona 1928. Ny toko voalohany dia naorina ao amin'ny Oniversiten'i Illinois State Normal (Illinois State University ankehitriny) eo ambany fitarihan'ny Dr. Robert G. Buzzard. Buzzard, profesora ao amin'ny oniversite, dia nino ny maha-zava-dehibe ny klioban'ny jeografian'ny mpianatra. Tamin'ny fotoana nananganana azy, dia nitombo tamin'ny mpikambana 33 ny toko ao amin'ny Illinois State Normal University saingy tapa-kevitra ny hampivelatra ny GTU amin'ny fikambanana iray manerana ny firenena i Buzzard. Folo taona taty aoriana dia nanampy 14 toko ao amin'ny oniversite manerana an'i Etazonia ny fikambanana. Ankehitriny, misy toko 200 mahery, anisan'izany ireo oniversite any Kanada sy Meksika.
Sary famantarana ny Gamma Theta Upsilon
Ny mariky ny GTU dia marika famantarana manan-danja fito-sided. Eo amin'ny fototry ny soratra famantarana, misy kintana fotsy milaza an'i Polaris, ampiasain'ny mpialoha lalana sy ankehitriny. Eo ambanin'ny fivezivezena dia misy ranomasim-be dimy izay mampiseho ny ranomasim-be dimy izay nitondra mpikaroka tany amin'ny tany vaovao. Ny lafiny ilan'ny ampinga dia manondro ny voalohandohan'ny kontinanta fito . Ny fametrahana ireo lohataona ireo eo amin'ny ampinga dia tanjona; Ny kontinanta Eoropa, Azia, Afrika ary Aostralia dia mifanakaiky. Ny ampita kosa dia mampiseho ny tontolon'ny New World tany Amerika Avaratra, Amerika Atsimo ary ny Antarctica izay hita taty aoriana. Ny tandindona hafa dia avy amin'ny loko aseho eo amin'ny lohateny famantarana. Brown dia maneho ny tany. Ny manga manga dia manondro ny ranomasina, ary ny volamena dia manondro ny lanitra na ny masoandro.
Tanjona amin'ny Gamma Theta Upsilon
Ny mpikambana rehetra sy ny GTU dia mizara tanjona iraisana, araka ny hita ao amin'ny tranonkala Gamma Theta Upsilon. Ny asa aman-draharaha ao amin'ny tetikasa, avy amin'ny tetik'asa fanompoana hikaroka, dia tokony hitazona ireo tanjona enina ireo. Ny tanjona rehetra dia mifantoka amin'ny fanaparitahana ara-drariny ny jeografia. Ny tanjona dia:
1. Ho tombontsoam-pahaizana manokana amin'ny jeografia amin'ny alalan'ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ireo izay liana amin'ny sehatra.
2. Fanamafisana orina ny mpianatra sy ny fiofanana matihanina amin'ny alalan'ny traikefa amin'ny akademika, ankoatra ny ao amin'ny efitrano fianarana sy ny laboratoara.
3. Hanamafy ny satan'ny jeografia ho toy ny fifehezana ara-kolontsaina sy azo ampiharina amin'ny fianarana sy ny fanadihadiana.
4. Mamporisika ny fikarohana momba ny kalitao avo lenta sy ny fampiroboroboana ny famoahana ny famoahana.
5. Mamorona sy mitantana vola amin'ny fanamafisana ny fianarana diplaoma sy / na fikarohana amin'ny sehatry ny jeografia.
6. Mamporisika ny mpikambana hampiasa fahalalana sy fahaizana jeografia ho an'ny olombelona.
Gamma Theta Upsilon Organisation
GTU dia tarihin'ny lalàm-panorenana sy ny lalàm-pahataperana efa hatry ny ela, izay ahitana ny fanambarana ho an'ny misiona, torolàlana ho an'ny toko tsirairay, ary ny torolàlana sy ny torolàlana. Ny toko tsirairay dia tokony hanaraka akaiky ny lalàm-panorenana sy ny fitsipika.
Ao anatin'ny fikambanana, GTU dia manendry Komity Mpanatanteraka Nasionaly. Ny anjara asan'ny filoha, ny filoha lefitry ny filoha lefitra, ny filoha lefitry ny roa taona, ny filoham-pirenena teo aloha, ny sekretera mpanatanteraka, ny sekretera misoratra amin'ny horonan-tsoratra, Comptroller, ary ny mpahay tantara. Amin'ny ankapobeny, ireo andraikitra ireo dia apetraky ny fakam-panahy izay manoro hevitra ny sehatry ny oniversite. Ny mpianatra koa dia voafidy amin'ny Komity Mpanatanteraka ny GTU amin'ny maha-solontenan'ny mpianatra zokiny sy zandriny. Omega Omega, ny toko Alimni ho an'ny mpikambana GTU, dia manana solontena ihany koa. Ankoatra izany, ny tonian'ny The Geographical Bulletin dia mpikambana ao amin'ny Komity Mpanatanteraka eo an-toerana.
Ny biraon'ny mpitantana ny GTU dia mivory indroa isan-taona; voalohany amin'ny fivoriana fanao isan-taona amin'ny Fikambanan'ny Amerikanina Geographers, faharoa ao amin'ny Filankevi-Pirenena momba ny Fihaonambe ara-jeolojia.
Amin'ity fotoana ity, ny mpikambana ao amin'ny birao dia mifanakalo hevitra mikasika ny fomba fiasan'ny volana ho avy, anisan'izany ny fizarana, ny saram-pianarana, ary ny fampandrosoana ny drafitra stratejikan'ny fikambanana.
Fahamendrehana ho mpikambana ao amin'ny Gamma Theta Upsilon
Ny fepetra sasany dia tsy maintsy atao ho an'ny mpikambana ao amin'ny GTU. Voalohany, ny kandidà liana dia tsy maintsy nahavita farafaharatsiny telo farafaharatsiny tao amin'ny fianarana ambony momba ny fianarana ambony. Faharoa, ny isa amin'ny isa 3.3 na mihoatra (amin'ny isa 4.0), anisan'izany ny lalao jeografika, dia ilaina. Fahatelo, tokony ho efa nahavita telo semester na 5 kilaometatra ny kandidà. Ny fampiharana manasongadina ny fahombiazanao amin'ireo faritra ireo dia azo alaina ao amin'ny toko misy anao. Ny fiarahana amin'ny fampiharana dia sanda tokana.
Fanombohana mankany Gamma Theta Upsilon
Ny mpikambana vaovao dia matetika mandeha amin'ny GTU indray mandeha isan-taona. Fombafomba fanombohana dia mety ho tsy ara-potoana (natao nandritra ny fivoriana) na fombafomba (natao tao anatin'ny fanasana lehibe) ary matetika no manamora ny mpanolotsaina mpanampy, ny filoha ary ny filoha lefitra. Amin'ny fotoam-pivoriana, ny mpikambana tsirairay dia tokony hianiana ny fianianany mba hanompo amin'ny jeografia. Avy eo, ireo mpikambana vaovao dia aseho miaraka amin'ny karatra, taratasy fanamarinana ary pensilihazo miaraka amin'ny soratra famantarana GTU. Ampirisihina ny mpikambana hanao ny penso ho famantarana ny fanoloran-tenany amin'ny sehatry ny jeografia.
Tsy ny sampana rehetra momba ny jeografia manana sampana jeografia dia manana toko GTU; Na izany aza dia azo atao ny mametraka raha misy fepetra sasantsasany. Ny rafi-panabeazanao dia tsy maintsy manana oniversite na oniversité manana mari-pahaizana maimaim-poana, tsy ampy taona, na mari-pahaizana amin'ny jeografia. Tsy maintsy manana enina na mihoatra ny olona liana amin'ny maha-mpikambana izay afaka mahafeno ny fepetra takiana. Ny mpikambana iray mpanampy dia tokony hanohana ny toko GTU vaovao. Avy eo, ny Filohan'ny GTU sy ny Filoha Lefitra Voalohany dia mifidy ny hanaiky ny toko vaovao. Ny sekretera mpanatanteraka dia manamafy ny fanomezan-dalànan'ny akademika azonao ary afaka miasa amin'ny fomba ofisialy ho toko vaovao GTU ianao ary manamboninahitra voafidy hanompo ny fikambanana.
Ny anjara asan'ny tsirairay ao amin'ny toko tsirairay dia mety samy hafa, na dia manana ny Filoha sy ny mpanolotsaina mpanabe aza ny ankamaroan'ny fikambanana. Ny andraikitra lehibe hafa dia ny filoha lefitra, ny mpitam-bola, ary ny sekretera. Ny fizarana sasany dia mifidy tantara ho an'ny mpahay tantara mba hanoratra antotan-taratasy sy hetsika lehibe. Ankoatra izany, ny mpiandraikitra ara-sosialy sy ny mpikaroka dia afaka mifidy.
Maro ireo GTU no mitazona ireo fivoriana isan-kerinandro, isan-kerinandro, na isam-bolana izay ifanakalozan'ny tetikasa, teti-bola, ary fikarohana akademika. Ny rafitra mahazatra amin'ny fivoriana dia miovaova amin'ny fizarana ka hatramin'ny toko. Amin'ny ankapobeny, ny fivoriana dia ho tarihan'ny Filoham-pirenen'ny toko ary handraisan'ny mpanolo-tsaina mpanara-maso azy. Ny famandrihana avy amin'ny mpitahiry vola momba ny famatsiam-bola dia endrika tsy tapaka. Ny fivoriana dia tsy maintsy atao indray mandeha isan-taona, araka ny torolalana GTU.
GTU dia manohana ny toko Alimni, Omega Omega. Ity toko ity dia mirakitra ny mpikambana matihanina rehetra maneran-tany. Ny saram-panamboarana dia mihoatra ny $ 10 isam-bolana ho $ 400 mandritra ny androm-piainany. Ireo mpikamban'ny Omega Omega dia nahazo ny gazetim-pifandraisana maimaim-poana amin'ny alimaina sy ny vaovao, ary koa ny The Geographical Bulletin.
Gamma Theta Upsilon Activities
Ireo toko GTU mavitrika no manohana ara-potoana ireo asa atao. Amin'ny ankapobeny, ny fisehoan-javatra dia misokatra ho an'ny mpikambana ary koa ny fiaraha-monina eo an-toerana. Ny hetsika dia azo dokam-barotra amin'ny alalan'ny flyer ao amin'ny campus, lisitry ny mailaka mpianatra, ary ny gazety anjerimanontolo.
Ny fandraisana anjara amin'ny hetsika fanompoana dia singa manan-danja amin'ny iraka natokana ho an'ny GTU. Ohatra, ny toko Kappa ao amin'ny Oniversiten'i Kentucky dia manana fomba fanao isam-bolana amin'ny fanaovana asa an-tsitrapo ao amin'ny lakozia eo an-toerana. Ny kapitalin'i Chi ao amin'ny Oniversiten'i Oklahoma dia nanolotra fanomezana kristiana ho an'ny zaza tsy ampy taona. Ny sampana ao amin'ny Anjerimanontolon'i South Mississippi an'ny Iota Alpha dia nanolo-tena hanangona fako tao amin'ny Nosy Ship teo akaiky sy Black Creek.
Ny fitsangatsanganana an-dalambe, izay matetika miresaka momba ny jeografia fialamboly, dia fanao iraisan'ny GTU. Tao amin'ny Oniversiten'i St. Cloud, ny kapitalin'i Kappa Lambda ao GTU dia nanohana ny lakana sy ny lasy ho an'ny nosy Apôstôlika. Ny toko Delta Lambda ao amin'ny University of South Alabama dia nikarakara fitsangatsanganana avy amin'ny reniranon'i Styx. Ny toko ao amin'ny State Chi ao amin'ny Oniversiten'i North Michigan dia nitarika fialan-tsasatra nilentika tany Lake Michigan ho an'ny fianarana ho an'ny mpikambana.
Ao anatin'ny ezaka hanaparitahana fahalalana ara-jeografika, maro ireo toko manasa mpandahateny handrakotra ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao na hampiantrano seminera fikarohana mifandraika amin'ny fitsipi-pifehezana. Ireo hetsika, natokan'ny GTU toko, dia misokatra ho an'ny olon-drehetra ao amin'ny campus. Ny Mu State, University State Mississippi, dia nanomana ny Symposium Student Student Geophysiology izay nanasongadina ireo mpianatra manolotra ny fikarohana amin'ny alalan'ny fotoam-pampianarana sy peta-drindrina. Ao amin'ny University of California State - San Bernardino, ny chapitre GTU dia nanohana ny lahateny avy amin'ny fakulta sy ny mpitsidika iray mpitsidika miaraka amin'ny Weekend Awareness Geography International.
Indroa isan-taona ny GTU no mamoaka ny The Geographical Bulletin . Ny mpikambana ao amin'ny GTU dia ampirisihina hanolotra asa fanadihadiana momba ny lohahevitra momba ny jeografia ao amin'ny diary matihanina. Ankoatra izany, azo atao pirinty ny taratasy avy amin'ny mpikambana ao amin'ny mpampianatra raha mahaliana sy manan-danja izy ireo.
Anisan'ny tombontsoa maro amin'ny mpikambana GTU ny fidirana amin'ny vatsim-pianarana. Isan-taona dia manome vatsim-pianarana roa ho an'ny mpianatra nahazo diplaoma ary telo hatramin'ny nahazo mari-pahaizana ny fikambanana. Ho an'ny mpandray anjara GTT mandray anjara mavitrika amin'ny fanatanterahana ny lanjany ho an'ny vatsim-pianarana, dia nandray anjara mavitrika tamin'ny tanjon'ny lehibeny. Ny vatsim-pianarana eo amin'ny sehatra nasionaly dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny Tahirim-panabeazan'ny GTU izay tarihin'ny komity iray. Ny fizarana tsirairay dia afaka manome vatsim-pianarana fanampiny mba mendrika mpikambana.
Gamma Theta Upsilon dia miara-miasa amin'ny fikambanana roa tahaka ny saina mba hampiroborobo ny sehatry ny jeografia manontolo; GTU dia mavitrika amin'ny fivoriana fanao isan-taona an'ny The Association of American Geographers sy ny Filankevi-Pirenena momba ny Fanabeazana Jeografia. Amin'ireo fivoriana ireo, ny mpikambana GTU dia manatrika fivoriana, fanasana, ary hetsika ara-tsosialy. Ankoatr'izany, ny GTU dia mpikambana ao amin'ny Fikambanam-piarahamonina momba ny firaisana amin'ny kolontsaina, izay mametraka fari-pahaizana ho an'ny tombontsoan'ny fiarahamonina.
Miomana amin'ny alikaola
Isan'ny fisakafoanan'ny McDonald Worldwide
Fanontaniana mahazatra momba ny kontinanta
Karazana asa amin'ny sehatry ny jeografia
Ireo Lovantsofina Jeografia
Inona no tari-dalana ataon'ny sambo manerana ny lakandranon'i Panama?
Lisitr'izay ofisialy avy amin'ny Faritra maneran-tany
Lisitry ny fametrahana ny anaran'ny mpampiasa
Ny famaritana ny dialectology
Ny Paska (Pesach) Tantara
Trano fialofana afo natsangan'i Frank Lloyd Wright
Hinamatsuri, Fetin'ny Paka ao Japana
Famaritana ny fehezan-teny hoe 'Ronda' amin'ny famonoana amin'ny tafika
Ahoana ny fanolorana boaty - Skateboarding toro-hevitra
Inona no dikan'ny hoe 'Christos Anesti'?
Fiaraha-mientan'ny vehivavy amin'ny taona 1960
Fampahalalana momba ny famakafakana
Ny Fiainan'ny Saint Santo sy Poeta Hindu Sant Surdas
Mihainoa fihainoana fihainoana sy fanazaran-tena ho an'ny mpianatra frantsay
Iza ireo Visigoths?
Colin Ferguson sy ny famonoana an-dalamby Long Island
John Tyler - Filohan'ny folo taona any Etazonia
Top Boky: Eoropa 1500 - 1700
Ny vavaka ataon'ny ray aman-dreny
12 amin'ireo hira mahazatra mandritra ny fotoana maharitra indrindra
Coca-Cola any amin'ny tany tsirairay fa telo? Tsia!
Mila manao fikarohana amin'ny gile ve ianao?
Iza no nanoratra an'io "hazavana kely" ahy io?
Inona avy ireo zo voajanahary?
Inona ny Black Hole?
Revolisiona Amerikana: Battle of the Saintes
Taom-baovao Alemàna sy Aostralia (Neujahrsbräuche)